လက်အိတ်ဝတ်ထားတာနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် မကူးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား? | CeleTrend
လက်အိတ်ဝတ်ထားတာနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် မကူးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား?
ဘယ်လိုပဲ လက်အိတ်ဝတ်ထားဝတ်ထား တစ်ခုခုကို ကိုင်တွယ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာ လက်အိတ်စွတ်ထားတဲ့အတိုင်း လက်ကိုမဆေးဘူးဆိုရင်တော့ ရောဂါကူးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သူနာပြုလေးတစ်ဦးက ဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်။တကယ်လို့ ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း လက်မဆေးဘူးဆိုရင် လက်အိတ်ဝတ်ထားလည်း ရောဂါပိုး‌တွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်အိတ်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ သို့သော် အရာဝတ္ထုများမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခြင်း (Cross Contamination) ကိုတော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ဥပမာပြရမယ်ဆို ကိုယ်က ကားထဲကနေ ကုန်စုံဆိုင်ကို သွားဖို့ လက်အိတ်ဝတ်ပြီး ဖုန်းကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီး ယူခဲ့တယ် ဆိုပါစို့။ ပြီးရင် ကုန်စုံဆိုင်ထဲ ဝယ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကို ပတ်ကြည့်နေရင်းနဲ့ အိမ်သာသုံးစက္ကူကို ဝယ်ဖို့ယူလိုက်ပြီး ဈေးခြင်းတောင်းထဲကို ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ပိုးကပ်နေတဲ့ အိမ်သာသုံးစက္ကူက‌နေတဆင့် လက်အိတ်ကို ရောဂါပိုးတွေ ကပ်သွားတယ်‌ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လဲ ရောဂါပိုးတွေဟာ ဈေးခြင်းတောင်းနဲ့ လက်အိတ်တွေပေါ်မှာပဲ ရှိသေးလို့ ကိစ္စတော့မရှိသေးပါဘူး။အဲ့မှာနောက်ထပ်ဝယ်ဖို့ ပစ္စည်းတွေ ထပ်ကြည့်နေချိန်မှာ ဖုန်းထဲကို Message ဝင်လာလို့ ထုတ်ကြည့်လိုက်ပြီး အမျိုးသားက ကြက်သားဝယ်ခဲ့လို့ ပြောထားလို့ ဝယ်ခဲ့မယ့်အကြောင်း လက်အိတ် ဝတ်လျက်နဲ့ပဲ Reply ပြန်လိုက်မိတယ်။
ပြီးရင်လဲ ပစ္စည်းတွေကို လိုက်ပတ်ကြည့်ရင်း အားလုံးကို လက်နဲ့ထိခဲ့တယ်။ အဲ့အချိန်မှာပဲ နှာခေါင်းကယားလာလို့ နှာခေါင်းကိုလဲ ကုတ်လိုက်သေးတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ရောဂါပိုးတွေဟာ လက်အိတ်ကနေတဆင့် ဖုန်းမှာကပ်သွားပြီး လက်အိတ်နဲ့ နှာခေါင်းကို ထိလိုက်တဲ့အခါ နှာခေါင်းမှာလဲ ထိသွားပါတယ်။နောက်တစ်ခါ ဖုန်းမြည်လာလို့ ကိုင်လိုက်တော့လည်း ဖုန်းမှာ ရောဂါပိုးတွေက ကပ်နေပြီးပြီဆိုတော့ ဖုန်းနဲ့ထိမိလိုက်တဲ့ မျက်နှာကိုလည်း ရောဂါပိုးတွေက ထပ်ကပ်သွားပါရော။ ဈေးဝယ်ပြီးတဲ့အခါ ဖုန်းကို အိတ်ကပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီး ကားဆီကိုပြန်သွား၊ လက်အိတ်ကိုလဲ ချွတ်လို့၊ အမှိုက်ပုံးထဲ သေချာထည့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး စိတ်ချလက်ချ နေလိုက်ပေမယ့် ရောဂါပိုးကကိုယ့်ဆီကို ကပ်ပါလာနေခဲ့ပြီးပါပြီ။
လက်အိတ်‌တွေ ဝတ်ထားလို့ ကိုယ့်လက်က သန့်တယ်ဆိုပေမယ့် အထက်ပါဥပမာတွေအရ အရာဝတ္ထုများမှ တဆင့် ကူးစက်ခြင်း (Cross Contamination) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်အိတ်တွေ ဝတ်ထားပေမယ့် ဖုန်းများ၊ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ ပြင်ပအရာဝတ္ထုများကို ထိတွေ့ခြင်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြည်ပါ။အသုံးပြုပြီးသားလက်အိတ်တွေကိုလဲ အမှိုက်ပုံးတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ လက်အိတ်ဝတ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ လက်ဗလာနဲ့ဖြစ်စေ လက်ကိုခဏခဏဆေးပါ။
Credit The Health Republic
ဘယျလိုပဲ လကျအိတျဝတျထားဝတျထား တဈခုခုကို ကိုငျတှယျပွီးတဲ့အခါတိုငျးမှာ လကျအိတျစှတျထားတဲ့အတိုငျး လကျကိုမဆေးဘူးဆိုရငျတော့ ရောဂါကူးနိုငျပါတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို သူနာပွုလေးတဈဦးက ဒီလိုရှငျးပွထားပါတယျ။တကယျလို့ ကိုယျက တဈစုံတဈခုကို ကိုငျတှယျပွီးတိုငျး လကျမဆေးဘူးဆိုရငျ လကျအိတျဝတျထားလညျး ရောဂါပိုး‌တှေ ကူးစကျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျအိတျဝတျခငျြတယျဆိုရငျလညျး ရပါတယျ။ သို့သျော အရာဝတ်ထုမြားမှတဈဆငျ့ ကူးစကျခွငျး (Cross Contamination) ကိုတော့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
ဥပမာပွရမယျဆို ကိုယျက ကားထဲကနေ ကုနျစုံဆိုငျကို သှားဖို့ လကျအိတျဝတျပွီး ဖုနျးကိုအိတျထဲထညျ့ပွီး ယူခဲ့တယျ ဆိုပါစို့။ ပွီးရငျ ကုနျစုံဆိုငျထဲ ဝယျရမယျ့ပစ်စညျးတှကေို ပတျကွညျ့နရေငျးနဲ့ အိမျသာသုံးစက်ကူကို ဝယျဖို့ယူလိုကျပွီး ဈေးခွငျးတောငျးထဲကို ထညျ့လိုကျတဲ့အခါ ပိုးကပျနတေဲ့ အိမျသာသုံးစက်ကူက‌နတေဆငျ့ လကျအိတျကို ရောဂါပိုးတှေ ကပျသှားတယျ‌ပေါ့။ ဒါပမေယျ့လဲ ရောဂါပိုးတှဟော ဈေးခွငျးတောငျးနဲ့ လကျအိတျတှပေျေါမှာပဲ ရှိသေးလို့ ကိစ်စတော့မရှိသေးပါဘူး။အဲ့မှာနောကျထပျဝယျဖို့ ပစ်စညျးတှေ ထပျကွညျ့နခြေိနျမှာ ဖုနျးထဲကို Message ဝငျလာလို့ ထုတျကွညျ့လိုကျပွီး အမြိုးသားက ကွကျသားဝယျခဲ့လို့ ပွောထားလို့ ဝယျခဲ့မယျ့အကွောငျး လကျအိတျ ဝတျလကျြနဲ့ပဲ Reply ပွနျလိုကျမိတယျ။
ပွီးရငျလဲ ပစ်စညျးတှကေို လိုကျပတျကွညျ့ရငျး အားလုံးကို လကျနဲ့ထိခဲ့တယျ။ အဲ့အခြိနျမှာပဲ နှာခေါငျးကယားလာလို့ နှာခေါငျးကိုလဲ ကုတျလိုကျသေးတယျ။ အဲ့ဒီအခါ ရောဂါပိုးတှဟော လကျအိတျကနတေဆငျ့ ဖုနျးမှာကပျသှားပွီး လကျအိတျနဲ့ နှာခေါငျးကို ထိလိုကျတဲ့အခါ နှာခေါငျးမှာလဲ ထိသှားပါတယျ။နောကျတဈခါ ဖုနျးမွညျလာလို့ ကိုငျလိုကျတော့လညျး ဖုနျးမှာ ရောဂါပိုးတှကေ ကပျနပွေီးပွီဆိုတော့ ဖုနျးနဲ့ထိမိလိုကျတဲ့ မကျြနှာကိုလညျး ရောဂါပိုးတှကေ ထပျကပျသှားပါရော။ ဈေးဝယျပွီးတဲ့အခါ ဖုနျးကို အိတျကပျထဲထညျ့လိုကျပွီး ကားဆီကိုပွနျသှား၊ လကျအိတျကိုလဲ ခြှတျလို့၊ အမှိုကျပုံးထဲ သခြောထညျ့ခဲ့တယျဆိုပွီး စိတျခလြကျခြ နလေိုကျပမေယျ့ ရောဂါပိုးကကိုယျ့ဆီကို ကပျပါလာနခေဲ့ပွီးပါပွီ။
လကျအိတျ‌တှေ ဝတျထားလို့ ကိုယျ့လကျက သနျ့တယျဆိုပမေယျ့ အထကျပါဥပမာတှအေရ အရာဝတ်ထုမြားမှ တဆငျ့ ကူးစကျခွငျး (Cross Contamination) ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လကျအိတျတှေ ဝတျထားပမေယျ့ ဖုနျးမြား၊ တံခါးလကျကိုငျမြား၊ ပွငျပအရာဝတ်ထုမြားကို ထိတှခွေ့ငျးတှကေို အတတျနိုငျဆုံးရှောငျကွညျပါ။အသုံးပွုပွီးသားလကျအိတျတှကေိုလဲ အမှိုကျပုံးတှမှော စနဈတကစြှနျ့ပဈပါ။ အရေးကွီးဆုံးကတော့ လကျအိတျဝတျထားသညျဖွဈစေ၊ လကျဗလာနဲ့ဖွဈစေ လကျကိုခဏခဏဆေးပါ။
ရွှံ့နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဦးကျော်သူရုပ်ထုတဲ့ဗျာ…. တကယ့် လူအစစ်လို့တောင် ထင်ရတယ်
၂၀၇၀ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းသုံးထောင်ကျာ်မှာ နေထိုင်ဖို့မသင့်အောင် ပြင်းထန်သော အပူချိန်ထဲတွင် နေထိုင်ကြရတော့မည်